Mhirizhonga Inovhiringidza Misangano yeCopac muHarare neManicaland
Gunyana 20, 2010
Misangano yekutsvaga zvinodiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubumbiro idzva remitemo yenyika, yamiswa muHarare zvichitevera chisungo chabuda nekomiti yepamusoro soro yehurongwa uhu, kana kuti management committee. Chisungo ichi chaitwa pakatariswa mhirizhonga yakaitika pamisangano yakaitwa muHarare neChitungwiza neMugovera neSvondo, uye imwe iri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana.
Mumwe wemasachigaro eCopac, VaDouglas Mwonzora, vanoti vachagara pasi voona kuti chirongwa ichi chingaitwe riini zvakare muHarare, sezvo nzvimbo zhinji dzakavhiringidzwa.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinotiwo raona nhengo dzeZanu PF dzichienderera mberi nemisangano yekunyorwa kwebumbiro idzva, kunyange hazvo management committee yamisa hurongwa uhu muHarare. Izvi zvinonzi zvaitika kuDzivaresekwa, kumaindasitiri, pamwe nedzimwe nzvimbo dzemuMbare.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaSydney Chisi, vanoti zvava kuitika mukunyorwa kwebumbiro idzva zvava zvekudonzerana kwemasimba pakati pemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Ukuwo nhengo dzeMDC dziri muCopac kuManicaland, pamwe nemasangano akazvimirira oga, dzarohwa neMuvhuro dzikatandaniswa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF, vasori uye masoja. Izvi zvaitika kuMakoni South apo vanga vari kuita basa rekunzwa zviri kudiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubumbiro idzva.